1 UJehova wabe esebiza uMose wakhuluma naye ngaphandle kwetende lokuhlangana,+ wathi: 2 “Khuluma nabantwana bakwa-Israyeli,+ uthi kubo, ‘Uma kwenzeka umuntu othile kini eletha kuJehova umnikelo wezilwane ezifuywayo, kufanele nilethe umnikelo wezinkomo nowezimvu nezimbuzi. 3 “‘Uma umnikelo wakhe ungumnikelo wokushiswa+ womhlambi wezinkomo, kufanele anikele ngeduna eliphilile.+ Kufanele awulethe ngokuzithandela phambi kukaJehova emnyango wetende lokuhlangana.+ 4 Kumelwe abeke isandla sakhe enhloko yomnikelo wokushiswa, wamukelwe ngomusa+ ngenxa yakhe ukuze enzelwe isihlawulelo.+ 5 “‘Khona-ke leli duna kumelwe lihlatshwe phambi kukaJehova; amadodana ka-Aroni, abapristi,+ kumelwe alethe igazi, alifafaze nxazonke e-altare+ elisemnyango wetende lokuhlangana. 6 Umnikelo wokushiswa kumelwe uhlinzwe futhi uhlahlelwe ngokwezingxenye zawo.+ 7 Amadodana ka-Aroni, abapristi, abeke umlilo e-altare+ futhi ahlele izinkuni phezu komlilo.+ 8 Amadodana ka-Aroni, abapristi, kumelwe ahlele lezi zingxenye+ kanye nenhloko nomhlwehlwe phezu kwezinkuni ezisemlilweni e-altare. 9 Amathumbu+ ayo namanqina ayo kuyogezwa ngamanzi; umpristi ayithunqise yonke e-altare njengomnikelo wokushiswa, umnikelo oshiswa emlilweni, oyiphunga elizolisayo kuJehova.+ 10 “‘Uma umnikelo wakhe wokushiswa ungowomhlambi wezimvu nezimbuzi,+ kuyiwundlu noma izinyane lembuzi, uyoletha iduna+ eliphilile.+ 11 Kumelwe lihlatshelwe ohlangothini lwe-altare olungasenyakatho phambi kukaJehova, futhi amadodana ka-Aroni, abapristi, kumelwe afafaze igazi lalo nxazonke e-altare.+ 12 Kumelwe alihlahlele ngokwezingxenye zalo nenhloko yalo nomhlwehlwe walo, umpristi akuhlele phezu kwezinkuni ezisemlilweni ose-altare.+ 13 Amathumbu+ namanqina+ uyowageza ngamanzi; umpristi kumelwe alilethe lonke alithunqise+ e-altare. Kungumnikelo wokushiswa, umnikelo oshiswa emlilweni, oyiphunga elizolisayo kuJehova.+ 14 “‘Nokho, uma umnikelo wakhe wokushiswa awenzela uJehova kungowezinyoni, khona-ke kumelwe alethe umnikelo wamahobhe+ noma wamaphuphu amajuba.+ 15 Umpristi kumelwe awulethe e-altare awunqunte+ ikhanda futhi awuthunqise e-altare, kodwa igazi lawo kumelwe likhishelwe ohlangothini lwe-altare. 16 Kumelwe asuse ingila yawo kanye nezinsiba zawo akuphonse eceleni kwe-altare, ngasempumalanga, endaweni yomlotha onamafutha.+ 17 Futhi kumelwe awusike phakathi emaphikweni awo. Akumelwe awuhlukanise.+ Khona-ke umpristi kumelwe awuthunqise e-altare, phezu kwezinkuni ezisemlilweni. Kungumnikelo wokushiswa,+ umnikelo owenziwa ngomlilo, oyiphunga elizolisayo kuJehova.+